ऊर्जावान एप्पल संग वायरलेस चार्जिंग को लागी काम गर्दछ आईफोन समाचार
तपाइँ सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ अझै कुनै आईफोन (स्टक) छैन जुन वायरलेस चार्ज गर्दछ। सबै कुराले संकेत गर्दछ कि कपर्टिनो कम्पनी वर्तमान समाधानहरू द्वारा विश्वस्त छैन, जहाँ हामीले उपकरणलाई सतहमा छोड्नुपर्दछ र यसले हाम्रो गतिशीलतालाई कम गर्दछ। भर्खरका अफवाहहरू भन्छन् कि एप्पलले भविष्यको आईफोनलाई क्षमता दिने योजना बनाएको छ वास्तविक वायरलेस चार्जिंग, जसको अर्थ यो ऊर्जा emitter बाट निश्चित दूरीमा हुन सक्छ। शुक्रबार, MacRumors उनले टिम कुकको कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीको नाम पनि राखे। ऊर्जावान.
ऊर्जावान टेक्नोलोजीको लागि जिम्मेवार छ जसले उपकरणहरू चार्ज गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गर्दछ लगभग m.। मीटरको दूरी, वाटप द्वारा प्रयोग गरिएको जस्तै। यसले हामीलाई आईफोन चार्ज गर्दा कोठाको चारैतिर घुमाउन अनुमति दिनेछ। तार्किक रूपमा, यस प्रकारको टेक्नोलोजीले केबल मार्फत छिटो चार्ज गर्दैन, तर यो हामीले प्रयोग गर्दा यसलाई चार्ज गर्न सक्षम हुन पर्याप्त हुनेछ। हामी उपकरण लाई नजिक ल्याएकै क्षणले लोडले यसको वेग बढाउनेछ।
ऊर्जावान: m मीटर टाढा वायरलेस चार्जिंग
त्यहाँ कुनै ठोस प्रमाण छैन कि एप्पलले ऊर्जावानको साथ साझेदारी गर्ने योजना बनाएको छ, तर त्यहाँ लुइस बेसनेसको प्रमाण छ विघटनकारी टेक रिसर्च हामीलाई बताउन को आरोप मा गरिएको छ। पहिलो, एप्पलले अर्को कम्पनीसँग काम गर्न मनपराउँदछ कि स्क्र्याचबाट आफ्नै टेक्नोलोजी सिर्जना गर्न, र यसको कारण यो छ कि कपर्टिनोका मानिसहरू वायरलेस चार्जिंगसँग सम्बन्धित थोरै प्याटेन्टहरू छन्। यदि तिनीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन् र आफ्नै लागि एक समाधान सिर्जना गर्न चाहन्थे, प्रणाली धेरै वर्षसम्म पर्याप्त राम्रो नहुन सक्छ, अर्कोतर्फ, तिनीहरू चेतन वा अन्जानमा अन्य कम्पनीहरूबाट पेटेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।
अर्कोतर्फ, बेसनीसले हामीलाई यो पनि प्रकट गर्दछ कि दुबै कम्पनीहरूले साझेदारी गरेका छन् उही निर्माताहरु: Foxconn र TSMC। थप रूपमा, यदि मेरो विश्वास छ, एप्पलले गतिशीलता गुमाएको कारण आईफोनमा इन्डक्सन चार्जिंग सिस्टम समावेश गर्ने निर्णय गरेको छैन भने, ऊर्जावान उत्तम साझेदार हुन सक्दछ, किनकि हालसालै मात्र यो सक्षम छ ग्यारेन्टीको साथ रिमोट उपकरणहरू चार्ज हुँदै।
२०१ early को सुरूमा, ऊर्जावानले एउटासँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो पाँच प्रमुख इलेक्ट्रोनिक कम्पनीहरू संसारको। यी companies कम्पनीहरू सामसु,, एचपी, मिसफाइस, हिताची र एप्पल हुनेछन्। बेसनेसका अनुसार, एप्पल कम्पनी सबैभन्दा धेरै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो:
त्यो सूचीबाट, हामी सुरक्षित रूपमा HP र हिटाची हटाउन सक्दछौं किनकि उनीहरूले फोन गर्दैनन्। यदि हामी विचार गर्दछौं कि सामसुले आफ्नै चिपहरू बनाउँदछ र त्यो WATT TSMC सँग काम गर्दछ, हामी यसलाई सूचीबाट पार गर्न सक्दछौं, केवल एप्पल र माइक्रोसफ्टबाट। वास्तविकतामा, माइक्रोसफ्ट मोबाइल मोबाइल दुनिया मा प्रवेश गरेको छ तर बाहिर आ अफवाह छ। त्यसोभए हामीसँग एउटा कम्पनी मात्र बाँकी छ। तार्किक रूपमा, पहिचान रहस्य रहनेछ किनकि एप्पलले आफ्ना साझेदारहरू र कर्मचारीहरूलाई गोप्यतामा धेरै जोर दियो।
यो सबै धेरै रोचक लाग्दछ। यस प्रकारको लोड एक क्रान्ति हुनेछ लोड गर्न सक्षम हुन हामी सार्दा। वास्तबमा, हामी केबल संग भन्दा बढी सार्न सक्छौं एप्पल स्टोरहरूमा २ मीटर बिजुली बिक्री भयो। स्पष्ट रूपमा, ती सबै सुविधाहरू हुन् जुन चाँडै वा पछि आउँछन्। प्रश्न यो छ: कहिले? र के हामी एक आईफोन real वास्तविक वायरलेस चार्जिंग संग देख्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » भविष्यको आईफोनको वास्तविक वायरलेस चार्जिंगका लागि एप्पलले एनर्गससँग काम गर्न सक्दछ
उत्तम कोटा प्रणाली हो, ओसिया द्वारा निर्मित, जससँग वाइफाइ नेटवर्कको समान दायरा छ। आईफोन र एए ब्याट्रीको साथ उनीहरूले यो परीक्षण गरिसकेका छन र ती राम्रो काम गर्दछन्। धेरै खराब तिनीहरूसँग अहिले सम्म बिक्रीको लागि केहि छैन। बरु म उनीहरूसँग एप्पलको टीम चाहन्छु।
जोनासलाई जवाफ दिनुहोस्
म्याक ओटाकारा: "त्यहाँ चम्किलो गुलाबीमा आईफोन seसे हुनेछ"